Video: Hakha Ah State Counselor A Rak Phanh Lio Bia Ka Halnak Kong – Chuncha News
Hakha ah State Counselorarak phanh lio bia ka halnak kong; Zei ruang ah State Counselor Daw Aung San Suu Kyi sin ah zarhpi ni kan hrialpiak in nidang tu ah kan tlawn uh ka ti ahcun, Khrihfa biaknak le zarhpi ni cu then awkattha lo. Zarh pi ni cu Pathian kan pek ni le kan sunghlawi niasi. Aho minung hmanh nih an hrawh kho lo i, kan biakmi Pathian nakin sunhlawiaphumi an um lo. Zarhpi ni aho paoh nih an kan upat piak le hrialpiak hi, miphun dang biaknak upat le biaknak zalonnak zongasi tiah ka zumh.
Zarhpi ni rat ka hrial cang lai tiahakan lettu Daw Aung San Suu Kyi cung zong ah tampi kaa lawm. Hmailei zong kan ram le miphun caahadik,athat tiah ka ruahmi cung ah aho mithmanh hmanh zoh lo in tuan le chimrel zungzal kaa tim.
(Khatlei in Chin ramkulh ah eihmuar kong mipi nih an chim tuk tik ah le kanmah zong nih kan hngalhmiaum caah eihmuar dohnak commission Chin State ah chiah ding ah le Hakha Timit kong vaivuanh dirhmunaphanh caah ka hal chihmiasi)
Video zoh duhmi nih LINK: https://youtu.be/HHGD2ooPMSU
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ခရီးစဉ်များ ရှောင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တောင်းဆိုခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုတာ သီးသန့်၊ ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ ခတ်အဆက်ဆက်တွင် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ (များသော်အားဖြင့် တမင်ရည်ရွက်ချက်ဖြင့်) အချို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ ခရီးစဉ် ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အသိမှတ်ပြုပြီး ခရီးစဉ်များမပြုလုပ်ခြင်းသည် လူမျိုးတစ်မျိုး၏ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားကို လေးစားရာကျပြီး ဘာသားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ပေးတာလည်း ဖြစ်တယ်။
ရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက် နေ့ထူးမြတ်ဖြစ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် နောင်လာမည့် ခရီးစဉ်များမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး မသွားဖို့ ကြိုးစားသွားမည်ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်တို့ လူမျိုးနှင့် နိုင်ငံ့အတွက် အရေးကြီးပြီး မှန်ကန်သောအရာများကို ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှ မလိုက်ဘဲ ဆက်လက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး စီမံဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Video zoh duhmi nih LINK: https://youtu.be/HHGD2ooPMSU
Catialtu: Salai Van Bawi Lian